Wadahadaladii Yemen oo aan heshiis laga gaarin - BBC News Somali
Wadahadaladii Yemen oo aan heshiis laga gaarin
21 Disembar 2015
Image caption Wadahadala nabadda ee Yemen
Wadahadaladdii looga gol-lahaa sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Yemen ayaa lagu soo gebagabeeyay waddanka Switzerland.
Wadahadalani oo ay garwadeen ka ahayd Qaramada Midoobay ayaa la isugu keenay wakiillo ka kala socda dowladda Yemen ee ay taageerto Sucuudiga iyo fallaagada Xuutiyiinta.
Ujeedka ayaa ahaa in la isku dayo in heshiis laga gaaro sida ay hay'adaha gargaarka u gaari lahaayeen goobaha uu dagaalka ka jiro, is-dhaafsiga maxaabiista iyo in la kala qaado kooxaha hubeysan iyo hubkooda.
Hasayeeshee waxaa soo baxay khilaaf ku salaysan xadgudubyo la sheegay in loo gaystay xabad joojin ay ahayd in ay billaabato maalin ka hor inta aysan wadahadaladu furmin.
Waxa ugu wanaagsan ee wadahadaladaasi ka soo baxay ayaa ah in labada dhinac ay ku heshiiyeen in bisha soo socota ay markale kulmaan.
Horumar la gaaray
Arrintaana Qaramada Midoobay waxa ay u aragtaa in ay tahay horumar la gaaray, marka loo eego dagaalka qaraar ee Yemen ka socday muddada sagaalka bilood ah, dagaalkaasi oo galaaftay nolosha ugu yaraan lix kun oo qof.
Hasayeeshee arrinta aasaasiga ah ee ay Qaramada Midoobay doonaysay islamarkaana muhiimka u ah horumar laga gaaro wadahadalada ayaa ah in xabad joojintu ay dhaqan gasho, taasi oo aanan suuragelin.
Dhowr jeer ayaa lagu xadgudbay xabbad joojinta, laga soo billaabo markii ay wadahadaladu billowdeen, taasi oo keentay kala shaki.
Ku dhawaad 70 qof ayaa lagu soo warramayaa in Sabtidii lagu dilay dagaalo ka dhacay waqooyi galbeed Yemen.
Wadahadalo muddo socon doona
Haddaba si la isugu dayo in xaaladda salka loogu dhigo ayaa waxaa la sameeyay guddi ay xubno ka yihiin hoggaamiyeyaasha milatariga ee labada dhinac.
Haddii ay ku guulaystaan in ay dhaqan galiyaan xabbad joojin waartana waxaa suuragal ah in ay tallaabooyin kale u qaadaan dhanka nabadda oo ay ka mid tahay sii daynta maxaabiista, iyo in hubka la kala qaado.
Balse cidna ma ay filayso in wadahadalani ay noqdaan kuwo u dhaca si degdeg ah ama fudud.